राष्ट्रवादका ब्रमलुट - Marganugami Daily
Marganugami Daily Bichar राष्ट्रवादका ब्रमलुट
Marganugamidaily प्रकाशित समय 6:33:00 AM
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाममा मच्चाएको ब्रमलुटको पोल विस्तारै खुल्न थालेको छ । मधेसी जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको मधेस आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र मान मर्दन गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध ओली सरकारले गरेको नियुक्तिले हेर्दा कसरी एकल जातीय राष्ट्रवादलाई पृष्ठपोषण गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । देशका सबै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर राष्ट्रवादको डंका पिट्दै ओलीले देशलाई खोक्रो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उखान टुक्काकामा पिएचडी गर्नेलाई पनि चुनौति दिन सक्ने पहिचान बनाएका केपी ओलीले जनतालाई झुटा सपना बाँडेर दिगभ्रमित गरीरहे ।
भूकम्प पीडित जनताले वर्षदिन वित्दा पनि सरकारबाट टहरो बनाउन सहयोग पाएनन् । जाडो र बर्षातमा रातदिन विताउन बाध्य भए । भूकम्प पीडितका बालबालिका चिसोले मरिरहे,वर्षातमा रुझी रहे तर केपी ओली सरकारले झुठा सपनाहरु बाँडिरहे । भूकम्प पीडित जनता अवासका लागि रोइरहे । यता ओलीले मिडियालाई हातमा लिएर आफनो स्तुती गर्न लगाई सर्वसाधरण जनतालाई दिगभ्रमित गरिरहे । मधेस आन्दोलनमा दर्जनौं आमाले आफ्ना छोरा गुमाए । तर ओलीले समस्या समाधान गर्न कुनै चासो देखाएनन् । बरु ती सहीदलाई दुई चार वटा पाकेको आँपसंग तुलना गरेर मानवीय संवेदनाको समेत खिल्ली उडाए ।
नौ महिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मिडियावाजी गरेर राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको छवि बनाउने प्रयास गरे । मधेस आन्दोलनले देशमा इन्धन संकट आएपछि ओलीले नेपालले आफ्नै पेट्रोल खानी उत्खनन् गर्ने घोषणा गरे । उर्जा संकट अन्त्यका लागि हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरे । समुद्रमा आफ्नै जहाज चलाउने ठोकुवा गरे । तर ओलीले ९ महिनामा ६० लाखको खाजा खाएर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित भए । ओलीले वालुवाटारमा खाजाका लागि गरेको खर्च जोगाएर विद्युत उत्पान गर्न त्यो रकम लगानी गरेका भए, त्यहाँ खर्च भएको पैसाले करिब ५ हजार जनसंख्यालाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । तर ओलीले खाजा खर्च शीर्षकमा मात्र वालुवाटारमा नौ महिनामा करिब ६० लाख भन्दा बढी खर्च गरेर नयाँ इतिहास रच्न सफल भए ।
अहिले पनि सरकारी विद्यालयमा गरिबका छोरा छोरीले १५ रुपैया खाजा खान्छन् । गरिब र दलितका छोरा छोरीलाई १५ रुपैयामा खाजा खुवाउन बजेट बिनयोजन गर्ने ओलीले सरदर दैनिक करिब ७ लाखको खाजा खाए । यसले सर्वहारा पार्टीका नेता केपी ओलीको असली चेहरा सामुन्ने आएको छ ।
ओलीले ९ महिनामा गरेको नियुक्तीले उब्जाएको प्रश्न ?
केपी ओलीले नयाँ संविधान विश्वकै सर्वोउतकृष्ट संविधान भएको घोषणा गरे । संविधानमा कुनै जाति जातिलाई विभेद नगरेको जिकीर गरिरहे । तर ओली सरकारले सरकारको विभिन्न निकाय र तहमा गरेको नियुक्ति र बढुवा हुनेहरुको सूची हेर्दा ओलीमा रहेको एककजातीय नश्लवादको चेहरा सामुन्ने आएको छ । ओली सरकारले असार मसान्तसम्ममा ११५ जनाको नियक्ति गरेको थियो । त्यसमध्ये ९ जना मधेसी, १९ जना जनजाति थिए । १९ जना जनजाती मध्ये १४ जना नेवार समुदायका थिए । त्यस्तै ११५ जनामा १ जना पहाडी दलित र २ जना मुश्लिम रहेका थिए । ओली सरकारले राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा गरेको नियुक्तिलाई अधार मान्ने हो भने ८२ प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री समुदायलाई नियुक्ति गरेको देखिन्छ । नयाँ संविधान घोषणापछि गरिएको यो नियुक्तिले संविधान कति समावेशी बन्यो र त्यसको कार्यान्वयन ओलीहरुले कसरी गर्छन् ? भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । यसले विश्वको सर्वोउत्कृष्ट संविधानको पनि खिल्ली उडाएको छ ।
बोलीको विपरीत गर्ने ओलीको बानी
ओलीले ९ महिनामा जे बोले काम त्यसको ठिक विपरीत गरे । ओलीले आर्थिक भष्ट्राचार अन्त्य गर्न सरकार लागि पर्ने र त्यसको लागि सरकारी कर्मचारीलाई मितव्ययिता अपनाउन आहृवान गरे । तर, दिनभरि मीठा सपना देखाउने ओलीले बालुबाटारमा राज्यकोष दुरुपयोग गरे । ओली सरकारले सुशासन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनको दृष्टिकोणमा उनको कार्यकाल इतिहासले नर्बिसाउने गरी रचे । सभा सेमिनारमा र सार्वजनिक कार्यक्रममा हावादारी सपना घोषणा गरेर केही नागरिकबाट( जो भारतलाई गाली गर्ने व्यक्तिलाई नायक ठान्ने )बाट समर्थन बटुल्न भने सफल रहे ।
अनलाइन खवरले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार जाँदा जाँदै ओलीले बालुवाटारमा विभिन्न मितिमा बसेको वैठकको खाना, खाजा र नास्ता खर्च शीर्षकमा करिब १८ लाखको बिल पेश गरेका छन् । उनले एउटै मितिमा यति ठूलो रकमको खाजा,खानाको विल पेश गरे पनि यसरी सार्वजनिक गरेको विल कुन महिनाको हो र विभिन्न समयमा कतिवटा मिटिङको खाजा,खाना खर्च भएको हो भन्नेकुरा भने खुलाएका छैनन् ।
बुद्धनारायण खाद्यान्न सप्लायर्स प्रा.लि, अनमोल क्याटरिङ सर्भिस प्रा.लि. र सोल्टी होटलको विल भुक्तानी गर्ने गरी ओलीले साउन २० गते १८ लाखको खाजा खर्चको बिल पेश गरेका हुन् । एकै रात ९ लाख ६७ हजारको भोज खाएर सबभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीमा नाम दर्ता गराएका छन् । नयाँ वर्ष ०७३ को अवसरमा एउटा भोज गर्दा बालुवाटारमा ९ लाख ६७ रुपैँया सिध्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले असार १९ गते सार्वजनिक गरेको बिलमा उल्लेख छ ।
एक वर्ष भित्र देशका सबै तुइन विस्थापन गर्ने घोषण गरेका ओलीले करिब १० लाख रुपैँयाले कर्णालीमा रहेको एउटा छोटो दुरीको तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्न पुग्ने यति रकम ओली सरकारले एउटै भोजमा उडाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
ओली सरकारमा माओवादी केन्द्र,मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायत करिब सबै साना दललाई सहभागी गरी इतिहासमै सबभन्दा बढी उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बनाई राज्यको ढुकुटी दूरुपयोग गरियो । सरकारले गरेको राम्रा कामको जस सबै आफूले लिने र खराब कामको अपजस सबै अरुको काँधमा दिने काम पनि कसैसंग लुकेको छैन । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वसाधरण जनतालाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादका नाममा अल्झाएर देशलाई कंगाल बनाउने र एकल जातीय वर्चस्व कायम गर्न गरेको हर्कतहरु विस्तारै बाहिर आउन थालेको छ । बल्ल जनताले ओलीले गरेका हर्कत बुझन थालेका छन् । ओलीले गरेको यस्तो कार्यलाई अबको चुनावमा मधेसी जनताले जबाफ दिने नै छन् ।